ZBO Psa အောက်စီဂျင် Generating ပစ္စည်းကိရိယာများ - တရုတ်ဟန်ကျိုး Poly Air ကိုခှဲနပစ္စည်း
အလုပ်၏ဖိအား: အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများစုပ်ယူမယ့် variable ကိုဖိအားဖိအားလွှဲထိစိမ့် (Psa) အောက်စီဂျင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏နိယာမကို အသုံးပြု. စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်သည်။ အခြို့သောဖိအားအောက်, zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါမျက်နှာပြင်ထိစိမ့်ဝိသေသလက္ခဏာများ, နိုက်ထရိုဂျင်၏အမည်ရသည့် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ်လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ငန်းစဉ် PLC pneumatic အဆို့ရှင်ကထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့, အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုထက်အများကြီးကြီးမြတ်တော်မူ၏။ ..
အောက်စီဂျင်မျိုးဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများစုပ်ယူမယ့် variable ကိုဖိအားဖိအားလွှဲထိစိမ့် (Psa) အောက်စီဂျင်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏နိယာမကို အသုံးပြု. စုပ်ယူစုဆောင်းနိုင်သောအဖြစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြို့သောဖိအားအောက်, zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါမျက်နှာပြင်ထိစိမ့်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ရွေးချယ်မှုပေါ်လေထုထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်များအသုံးပြုခြင်း, နိုက်ထရိုဂျင်၏အမည်ရသည့် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါထိစိမ့်လုပ်ငန်းစဉ် PLC pneumatic အဆို့ရှင်အဖွင့်ကထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့, အောက်စီဂျင်ပမာဏကိုထက်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်သည် နှင့်ပိတ်ပွဲ, A, B နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသော Tata အခြားသံသရာ, အောက်စီဂျင်တစ်မျှော်စင်ဖိအားထိစိမ့်, မျှော်စင်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးဖြစ်စဉ်ကိုချွတ်ပြီးတစ်ဦးကလေဟာနယ်, အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၏ပြီးပြည့်စုံသောခွဲခြာ, အောက်စီဂျင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အရည်အချင်းပြည့်မီအဘို့လိုအပ်သည်။
အထူးဖိအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာ zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါ၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်;
အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှု: 1 ~ 600 nm3 / h
အောက်ဆီဂျင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်: 25% ~ 95%
အောက်စီဂျင်ဖိအား: 0.1 ~ 0,55 MPa (ချိန်ညှိ)
နှင်းအမှတ်, အောက်စီဂျင်: - 40 ℃ ~ 60 ℃
ယခင်: VPSA လေဟာနယ်အောက်စီဂျင် Generating ကိရိယာများ
နောက်တစ်ခု: ZBN Psa နိုက်ထရိုဂျင်ချမှတ်ခြင်း device ကို
အသိဉာဏ် PLC controller ကို
device ကိုထုတ်လုပ် ZMN အမြှေးပါးခွဲခြာနိုက်ထရိုဂျင်
ZDY Micro နဲ့ထိစိမ့် type ကိုချုံ့လေကြောင်းလေမှုတ်စက်